ပညာရေး၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူလူမဆိုခေတ်၏အကျင့်၏တန်ခိုးအာနုဘော်ကိုနားလည်နိုင်စေဖို့မဖြစ်နိုင်ကြောင့်စည်းကမ်းအဖြစ်, ဉာဏဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဗေဒသဘောအရအစဉ်အမြဲ, လက်၌လက်ကိုသွားအပြည့်အဝသာသူ့ရဲ့အချိန်ဆက်စပ်ထင်ရှားနေသည်။ ကျနော်တို့ဗေဒတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာမှာကြည့်ရှုမည် ခံစားချက်များကို , သူတို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဘယ်လို။
ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးစိတ်ပိုင်းအနုပညာသို့မဟုတ်သဘာဝတရား၏အကျင့်ကိုကျင့်တုံ့ပြန်နိုင်လျှင်, အဗေဒ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအကြောင်းပြောဆိုနိုင်သောကြောင့် - အနီးကပ်ဗေဒခံစားခကျြနဲ့စိတ်ခံစားမှုနှင့်ဆက်စပ် အမြင် ။ သို့သော်ဗေဒခံစားချက်တွေကိုအမှန်တကယ်နီးပါးမည်သည့်အရာဝတ္ထုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
သဗေဒအပျြောအပါး - စသည်တို့ဂီတအမြင်, စာအုပ်များ, ရှုခင်း၏ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်း, ။
အလှတရား၏အဓိပ္ပာယ် - ငါတို့သည်မသိစိတ် "ကဲ့သို့" ၏အဆင့်မှာအားလုံးမှတ်သားထားတဲ့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ခံစားချက်ဖြစ်ပါသည်နှင့် "မကြိုက်ဘူး";
;, ခမ်းနားသောခံစားချက်ကလူစကြဝဠာအနှံ့မြေဖြူတွေသုံးပြီးဘယ်လိုနားလည်သဘောပေါက် - ခမ်းနား feeling
အနုပညာနှင့်လှပသော၏အဓိပ္ပာယ် - တီထွင်ဖန်တီးမှုအကဲဖြတ်ရန်စွမ်းရည်။
စာအုပ်ဖတ်ခြင်းနှင့်သူတို့နှင့်အတူအပြိုင်အတွက် - - ခေတ်များ၏သမိုင်းနှင့်အထွေထွေယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံပေါ်တွင်စာပေအလှတရားတစ်ခုသဘောမျိုးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ရန်အတွက်ကြောင့်ဤအချက်အလက်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်စတင်နိုင်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဿုံသဘောသဘာဝ, ပန်းချီ, ဗိသုကာနှင့်အခြားလူလုပ်နှင့်ခိုင်ခံ့သောခံစားချက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုအံ့ဖှယျတ္ထု၏စဉျးစားဆငျခွကူညီပေးသည်။ စည်းကမ်းအဖြစ်, လူတစ်ဦးချင်းစီကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စိတျရှိပါတယ်: တချို့ပန်းချီကိုစိတ်ဝင်စားနေကြသည်, အခြားသူများ - ဂီတ။ သင့်ရဲ့ Find နှင့်တပ်မက်လိုချင်သောအဦးတည်ရွှေ့!
ခင်ပွန်းနေ့တိုင်းသောက် - စိတ်ပညာရှင်
စိတ်ကြွရောဂါ - ကအဘယ်အရာကို၎င်း၏ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့အရိပ်လက္ခဏာ
Childfree - က childfree နာမည်ကြီးတွေတို့တွင်အကဘာလဲဆိုတာ
အာရုံကြောနှင့် psyche ခိုင်ခံ့စေဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Kara - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
တူရကီ - ချက်ပြုတ်နည်း
Sandwich က - ကွဲပြားခြားနားသောဖြည့်နှင့်အတူအရသာအသားညှပ်ပေါင်များအတွက်ချက်ပြုတ်နည်းများ
Stein-Leventhal syndrome ရောဂါ
Scallop - စာရွက်
Mincemeat - ဂန္စာရွက်
သေသောနောက်ကိုခန္ဓာကိုယ်မှဖြစ်ပျက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး 13 လိုက်တယ်ဖြစ်ရပ်မှန်များ
အခြောက်လှန်းအသီးအပွ - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး